अभिनेत्री कंगना रनौतलाई वकिलले तलाई बीच सहरमा पक्रिएर ब***कार गरिदिन्छु भनेपछि !
मङ्गलबार ४ कार्तिक, २०७७
काठमाडौ । पछिल्लो समय निकै नै विवादमा पर्दै आएकी चर्चित बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौत तनावमा परेकी छिन् । कंगना आफ्नो बयानका लागि परिचित छन् । अहिले उनै कंगनालाई सामाजिक सञ्जालमा अ’नैतिक कार्यको चे’तावनी दिइएको छ ।
यो चेतावनी दिने अरु कोही नभएर भारत, ओडिशाका वकिल रहेका छन् । वास्तवमा, कंगनाले नवरात्रीको पहिलो दिनमा एउटा पोस्ट गरेकी थिइन् । यो चेतावनी त्यही पोष्टमा दिइएको थियो ।
यद्यपि जब यो कुरा धेरै विवादमा परेपछि वकिलले माफी मागेर आफ्नो फेसबुक आईडी ह्याक भएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । ओडिशाका वकिल मेहन्दी रजाले कंगना रनौतको पोस्टमा टिप्पणी गरेका थिए कि मध्य शहरमा त’लाई प’क्रिएर ब***का’र ग’रिदिन्छु ।
यस टिप्पणीमा मेहंदी रजाको कडा आलोचना गरियो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा आएको खबर अनुसार उनीबिरूद्ध उजुरी पनि दर्ता गरिएको छ । यस प्रकरण उच्च बिन्दुमा पुगेपछि रजाले माफी माग्दै एक पोस्ट लेखर आफ्नो आइडी ह्याक भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले पोस्टमा लेखे, ‘आज बेलुका मेरो फेसबुक आईडी ह्याक भयो र केही अपमानजनक टिप्पणीहरू पोष्ट गरिएको थियो । यो कुनै महिला वा समुदायको लागि मेरो विचार होइन । म पनि हैरान र दुःखी छु । म सबै व्यक्तिले मेरो माफी स्विकार्नुहोस् । म साँच्चै दुःखी छु ।’
मुम्बईको वान्द्रा अदालतले अभिनेत्री रनौत र उनकी बहिनी रंगोली चन्देलको विरुद्ध सामाजिक सद्भाव बिर्गान खोजेको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । उनले ट्वीट र अन्तर्वार्ता मार्फत साम्प्रदायिक असहजता फैलाएको आरोप लगाइएको छ । यो आदेश पछि, कंगनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् ।
उनले यस पोष्टका साथ आफ्ना केही तस्बिरहरू पनि साझा गरेकी थिइन् । कंगना रनौतले लेखिन्, ‘नवरात्रीको पहिलो दिनमा उपवास को छ ? यी तस्विरहरु आजको पूजा पछिका हुन् । म आज उपवास गरीरहेछु, तर यसै बीचमा मेरो बिरूद्ध अर्को एफआईआर दर्ता गरिएको छ, महाराष्ट्रको पप्पू सेनाले मलाई धेरै याद गरिरहेको छ, मलाई नभुल्नुहोस् म छिट्टै त्यहाँ आउनेछु। नवरात्रि ।’
विश्वसुन्दरीले नयाँ कपडाको मुल्य ट्याग नहटाई विमानस्थल पुगेपछि बनिन् जिस्क्याईको शिकार
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीको नयाँ व्यवसाय : बलिउड कलाकार सबैको फ्रेश हुँने ठाउँ
विश्व नम्बर १ अभिनेत्री प्रियंकाले आफु भन्दा १० बर्ष कान्छा पतिसँगको बेडरूम सीक्रेट खुलाएपछि !
अनमोल केसीको बहुचर्चित फिल्म ‘क्याप्टेन’ युबट्युबमा [ भिडियोसहित ]
दुनियाँको मनका अभिनेता रजनीकान्त राजनीतिमा हाम फाले, आफै पार्टी खोल्ने यस्तो छ तयारी
गर्भवती अभिनेत्री अनुष्का शर्मा यसकारण बनिन् मजाकको पात्र
भारती सिंहको घरमा एक छाक खानपनि धौ–धौ थियो, कयौँ रात भोकै सुत्थे
चर्चित मोडल रेश्मा घिमिरेले गरिन् यी युवकसँग इन्गेजमेन्ट [६ तस्विर हेर्नुहोस्]
विवाहबारे बल्ल बोलिन् अभिनेत्री श्वेता खड्का [भिडियोसहित]
जब करिश्मा कापिरहेको बेला आमिरले म्वाई खाए, यस दृश्य पछाडि स्तब्ध पार्ने कुरा खुल्यो
नरेन्द्र मोदी सरकारको समर्थ गर्दै किसान आन्दोलन बिरुद्ध उत्रिएकी कङ्गनामाथी संकट आइलाग्यो
भारतमा चर्चित नेपाली गायक उदितनारायणका छोरा आदित्यको विवाह तस्विर र फोटोले हंगामा मच्यायो
सलमान खानका फ्यानहरुका लागि दु:खको खबर, ५ वर्ष जेल सजायको फैसलाको मुद्धामा के भयो ?